नायक पल शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश
नवलपुरमा भने थुनछेक बहस हुन बाँकी छ।
खोटाङको बंशिलाघाटमा बेलिब्रिज जडानको माग
न्युज अफ नेपाल, खोटाङ । खोटाङका गठबन्धन दलले खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोसीस्थित बंशिलाघाटमा फेरी वा बेलिब्रिज जडानको माग गरेका छन् । कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका
ट्रयाक्टर चालक प्रजाको ज्यान गयो
न्युज अफ नेपाल, उदयपुर । उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका–३ हात्ती अड्केमा भएको ट्रयाक्टर दुर्घटनामा चालकको ज्यान गएको छ । गिट्टीको लोड बोकेर जाँदै गरेको ना ६ त ९६५० नम्बरको ट्रयाक्टर अनियन्त्रित
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रतिवेदनमाथि भोलि छलफल हुने
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । नेकपा एमालेको बुधबारको बैठक सकिएको छ। काठमाडौंको माइतीघरस्थिति कार्की ब्यांक्वेटमा बसेको बैठकको पहिलो दिन राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको छ। बुधवार प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि अब बिहीवार
अपहरणको नाटक गर्ने युवा पक्राउ
न्युज अफ नेपाल, दाङ । अपहरणमा परेको भन्दै अफवाह फैलाउने एक व्यक्तिलाई दाङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दाङमा बम जस्तो देखिने शंकास्पद बस्तुराखी अपहरणमा परेको भनी झुट्टा अफवाह फैलाउने
चुनावको मुखमा पार्टी फेर्नु चरम अवसरवाद : बाबुराम भट्टराई
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले चुनावको मुखमा पार्टी फेर्नु चरम अवसरवाद भएको टिप्पणी गरेका छन् । भट्टराईले दल भनेको राज्य
महोत्तरीको रौजा शरिफमा उर्सेपाकको रौनक
न्युज अफ नेपाल, जनकपुरधाम । नेपालको अजमेर शरिफ भनेर प्रसिद्ध महोत्तरीको रौजा मजार शरिफमा प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि उर्श ९धार्मिक मेला० लागेको छ । प्रत्येक चैत महिनामा रौजा
नियम उल्लंघन गर्नेलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री
काठमाडौं, ९ चैत्र । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघनका कारण सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नु परेको बताउँदै उहाँले
भ्यू टावरजस्ता अनावश्यक खर्च बढाउने योजना बजेटमा नराखौं : मन्त्री झाँक्री
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी बजेटमा भ्यू टावर लगायतका संरचनामा मन्त्रालयले लगानी गर्न नहुने बताउनुभ भएको छ । उहाँले बजेटमा अनावश्यक खर्च बढाउने योजना
भोलि प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ एकासाथ जनकपुर आउँदै
नेताद्वय प्रचण्ड र श्रेष्ठले पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गरेपछि प्रशिक्षण, भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी बन्ने केन्द्रीय सदस्य राजु खडकाले बताए ।
सिलाइ व्यवसाय सम्मानित पेशा हो : मन्त्री आले
विमल विष्ट, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सिलाइ व्यवसाय भनेको सम्मानित पेशा भएको बताउनु भएको छ । नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायीको दोस्रो साधारण सभालाई आज
राष्ट्रिय सङ्ग्राहलयलाई सार्क राष्ट्र स्तरको सङ्ग्राहलय बनाउन आवश्यक छ : मन्त्री आले
विमल विष्ट, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले काठमाडौँको छाउनीमा रहेको राष्ट्रिय सङ्ग्राहलयलाई सार्क राष्ट्र स्तरको सङ्ग्राहलय बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ । ६३ औँ राष्ट्रिय सङ्ग्राहलय
साहित्यकार भुसालको उपन्यास ‘विवाह रेखा’ सार्वजनिक
विभिन्न पत्रपत्रिका तथा पुस्तकमा लेख प्रकाशित भइरहने साहित्यकार भुसालको 'परिवेश' कवितासंग्रह यसअघि नै प्रकाशित भइसकेको छ ।
लेटाङ घटनाको जाँचबुझ हुन्छ : गृहमन्त्री खाण
उहाँले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गर्नुभएको छ ।
जग्गा बेच्न नदिएपछि साथीसँग मिलेर आमाको हत्या
न्युज अफ नेपाल, पोखरा । पोखरामा आमाले जग्गा बेच्न नदिएपछि छोराले हत्या गरिदिएका छन् । पोखरा १२ शीतलादेवी बस्दै आएकी नौमाया नेपालीलाई उनकै छोरा ओमले हत्या गरिदिएका हुन् । चैत
अर्घाखाँचीमा सम्पन्न तेस्रो उपमेयर कप क्रिकेटको उपाधि अर्घालाई
न्युज अफ नेपाल, अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्कमा जारी तेस्रो उपमेयर कप क्रिकेटमा सनपा ९ अर्घा विजयी भएको छ । आज भएको फाईनल खेलमा सनपा ८ किमडाँडालाई ३ विकेटले
सिआइबीमा किन गईन् नायिका कार्की ?
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । नायिका प्रियंका कार्की केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा पुगेकी छन् । डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सी विज्ञापनमा उनको फोटो राखेर दुरुपयोग गरेको भन्दै उनी ब्यरोमा पुगेको बताइएको छ
ओलीको प्रश्न : निर्वाचन आयोगको काम गठबन्धनको खटपट मिलाउने हो ?
पाँच दलको खटपट मिलाउने काम निर्वाचन आयोगको हो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका थिए ।
दमकको १८ तले भ्युटावरलाई अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न माओवादीको माग
न्युज अफ नेपाल, झापा । माओवादी केन्द्रले दमकमा बन्दै गरेको भ्युटावरलाई अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न माग गरेको छ । दमक(३ मा बन्दै गरेको १८ तले भ्युटावरलाई सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालमा रूपान्तरण
श्रीलंकामा हरेक ९० मिनेटमा एक महिलामाथि बलात्कार
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । दक्षिण एसियामै बढ्दो अपराधका रूपमा मौलाएको लैंगिक हिंसा मध्ये बलात्कारको घटना डरलाग्दो रूपमा बढेको छ । श्रीलंकामा हरेक ९० मिनेटमा एक महिला बलात्कृत हुने गरेको तथ्यांक